Fiteny arabo - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Teny arabo)
Isan'ny mpiteny 240 tapitrisa
Faritany Tontolo arabo (Afrika Avaratra, Azia Andrefana)
Sata Teny ofisialy:
Arabia Saodita, Aljeria, Baharainy, Ejipta, Jordania, Koweit, Lebanona, Libia, Maroka, Oman, Palestina, Siria, Tonizia, Yemen
Endrika:Liga Arabo, Endrika:Firenena Mikambana
Ny fiteny arabo dia fiteny semitika tenenina ao avaratr'i Afrika sy any Azia Andrefana. Io fiteny io dia anisan'ny fiteny ofisialin'ny Firenena Mikambana sy fiteny ofisialy tokan'ny Liga Arabo. Raha atambatra ny olona miteny arabo eo amin'ny firenena rehetra izay lazaina fa miteny arabo ofisialy, dia eo amin'ny 240 tapitrisa eo ho eo.
Ny fielezan'ny teny arabo ankehitriny dia avy amin'ny hery ara-tafiky ny Mozilmana izay tonga nampiely ny fivavahana silamo sy ny finiavan'ny kalifa (izay mibaiko ny mpino) ary ny mpino mampiely ny finoana silamo eran-tany. Ny boky masin'ny Silamo, ny Kor'any, izay nosoratana tamin'ny teny arabo, no manome lanja ny fiteny arabo eo anivon'ny vahoaka mozilmana eran-tany.
Noho ny fielezan'ny fiteny arabo dia samihafa ny fiteny an-tsoratra sy ny fiteny tenenina. Ao amin'ny fiteny an-tsoratra dia ahitana ny fiteny arabo klasika (fiteny arabo talohan'ny Kor'any sy ny fiteny arabon'ny Kor'any ary ny fiteny arabo taorian'ny Kor'any), sy ny fiteny arabo ankehitriny. Ny atao hoe fiteny arabo tenenina na fiteny arabo isan-toerana dia ny fitenim-paritra arabo rehetra.
Boky[hanova | hanova ny fango]
T. F. Mitchell, Mpampianatra teny anglisy any amin'ny oniversiten'i Leeds, Colloquial Arabic, collection « Teach Yourself Books », Hodder and Stoughton Ltd, London 1962, fanontana faha 10 1980, (ISBN 0-340-26519-1)
Boutros Hallaq, Agrégé de l'Université, L'arabe pour tous, collection « les langues pour tous », Presses Pocket, 1984, (ISBN 978-2-266-01340-8)
Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi, A Textbook for Arabic: Part Two. Georgetown University, Washington, DC, 2005 (ISBN 978-1589010963), fanontana voalohany 1997, (ISBN 0-87840-350-7)
Dictionnaire Mounged de poche (français arabe ─ ar), éditions Dar el-Machreq, dixième édition, Beyrouth.
Cours d'Arabe et autres ressources
Exemples de prononciation en MP3
Origine de l'écriture Arabe
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_arabo&oldid=1043345"
Articles containing non-English fiteny text
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2022 amin'ny 17:54 ity pejy ity.